Global Voices teny Malagasy » ‘Raha tsy voarakitra izany, dia tsy nitranga’: Volavolan-dalàna handràra ny fakàna sarimihetsika sy ny sarin’ireo miaramila eo am-perinasa ao Israely. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jolay 2018 5:45 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Israely, Palestina, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Raha lany, dia mety handrara ny fakàna sarimihetsika sy ny sarin'ny miaramila Isiraeliana eo am-perinasa ny ny volavolan-dalàna natolotra. Saripika avy amin'ilay mpisera Flickr Tal King (CC BY-NC 2.0). (CC BY-NC 2.0 )
Raha nitondra bulldozer ny polisy Israeliana mba handrava  ny tanàna Palestiniana Khan ao al-Ahmar tamin'ny 4 Jolay, dia nihetsika ny vondrom-piarahamonina madinika misy olona 200.
Nampiseho ny mponina ao an-toerana sy ireo mpikatroka mihanika sy manakana ny bulldozers ireo sary sy lahatsary nozaraina antserasera. Namaly tamin'ny fanafihana sy ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana ny tafika Israeliana, ka 35 naratra ary 11 voatazona nandritra izany.
Nampiseho miaramila manampahefana Israeliana nanaisotra fehin-doham-behivavy iray mpanao fihetsiketsehana no sady nodarohan'izy ireo, avy eo nazeran'izy ireo tamin'ny tany ary nitondra azy any amin'ny tsy fantatra ny lahatsary iray niparitaka tamin'ny aterineto .
Efa mahazatra hatramin'izay ao amin'ny faritra Palestiniana bodoin'i Israely ny fifandonana mahery vaika amin'ny tafika sy ny mpitandro ny filaminana Isiraeliana tahaka izany. Azo atao ny mandrakitra sy miloa-bava manohitra ny fifandonana tahaka izany ary lasa mora kokoa mihitsy aza nandritra ny folo taona farany, noho ny firongatry ny smartfinday.
Saingy mety ho sarotra kokoa izany atsy ho atsy- na tsy ara-dalàna mihitsy aza. Manosika volavolan-dalàna roa izay hametra bebe kokoa ny fanehoan-kevitra eo amin'ireo mpikatroka sy mpanao gazety mpanakiana ny politikany ao amin'ny faritany Palestiniana bodoin'i Israely ireo mpanao lalàna Israeliana.
Ny volavolan-dalàna  voalohany dia mametra ny fakàna sarimihetsika sy sarin'ny Tafi-Piarovana Isiraeliana (IDF), manasazy  dimy taona an-tranomaizina ho an'izay rehetra voaheloka noho ny “fakàna horonantsary, sary, ary/na fandraketam-peon'ireo miaramila eo am-panaovana ny asany, miaraka amin'ny fikasana hanohintohina ny sain'ny miaramila IDF sy ny mponina ao Isiraely.” Raha manapa-kevitra ny fitsarana fa ny “hanimba” ny fiarovam-pirenena [Israeliana] no fikasan'ilay mpaka sary,” dia mety ho voasazy folo taona an-tranomaizina izy.
Ny “fandraràna fakàna sary sy fandraketana ireo miaramila IDF” dia manameloka ny famoahana ireo sary na lahatsary amin'ny tambajotra sosialy sy ny fampahalalam-baovao mahazatra ihany koa.
Ny volavolan-dalàna faharoa dia manafaingana ny dingana ho an'ny manampahefam-panjakana mangataka ny fanesorana ireo votoaty an-tserasera hita fa “mandrisika herisetra” amin'ny sehatra media sosialy, ary efa vonona hankatoavin'ny  Knesset.
Mpikambana ao amin'ny Knesset, Robert Ilatov namaritra ny volavolan-dalàna voalohany  ho valin'ny “fanorisorenana” ny miaramila Isiraeliana nataon'ny “hetsika elatra ankavia” tao amin'ny sisintanin'i Gaza-Israel, izay naparitaky ny manampahefan'ny IDF tamin-kerisetra ny hetsi-panoherana.
Hatramin'ny 30 martsa 2018, Palestiniana an'arivony monina ao Gaza natao fahirano no nivorivory tao amin'ny sisintany iarahana amin'i Israely mba hanao hetsi-panoherana ‘Diabe Goavana ho an'ny Fiverenana’, manamarika ny faha 70 taona hatramin'ny nanerena ireo Palestiniana 700.000  handositra nandritra ny fananganana ny firenena Isiraely, hetsika fantatra amin'ny hoe Nakba  amin'ny teny Arabo (adika hoe loza na voina).+
Mitaky ny zo hiverina ho an'ireo nafindra toerana sy ny taranany, miaraka amin'ny famaranana ny fahirano Gaza  nandritra ny 11 taona ireo mpanao hetsi-panoherana. Hatramin'ny nanombohan'ny hetsi-panoherana tamin'ny martsa 2018, namono mpanao fihetsiketsehana 138 farafahakeliny ary nandratra an'arivony  ny tafika Israeliana.
Mpanao gazety kendren'ny tifitra Israeliana ao amin'ny sisintanin'i Gaza
Mpanao gazety roa no namoy ny ainy ary maro hafa no naratra rehefa tratry ny bala tena izy notifirin'ny Tafi-piarovana Israeliana (IDF), raha teo am-pandraketana ny hetsi-panoherana “Diabe Goavana ho amin'ny Fiverenana ‘.
Ny 6 Aprily, notifirin'ny tafika Israeliana i Yaser Murtaja, iray amin'ireo mpanorina ny sampam-baovao tsy miankina Ain Media  (“mason'ny media”). Maty izy ny alin'iny noho ny ratra nahazo azy. “Tamin'izy voatifitra, dia nanao akanjo misy soratra hoe ‘Press’ izay ahafantarana azy mazava fa mpanao gazety izy,” hoy  ny Reporter Without Borders.
Ny 25 aprily, namoy ny ainy noho ny bala nandratra azy tamin'ny kibony i Ahmed Abu Hussein, Palestiniana mpaka sary avy ao amin'ny Radio Voice of the People ao Gaza rehefa notifirin'ny tafika Israeliana tamin'ny 13 aprily izy raha nitantara ny hetsi-panoherana. Ny 8 Jona, voatifitra  teo ambany tongony ilay mpaka sary ao amin'ny AFM, Mohammed al-Baba raha nitatitra ny hetsi-panoherana. Maro ihany koa ireo mpanao gazety hafa naratra.
Tamin'ny fanambarana  tamin'ny 15 Mey, nametraka fangatahana tany amin'ny Fitsarana Iraisampirenena momba ny ady Heloka Bevava ny RSF mba hamotopototra ny “fitifirana mivantana nataon'ireo mpitsikilo IDF tamin'ireo mpanao gazety Palestiniana 20 teo ho eo nandritra ny fihetsiketsehana “Diaben'ny Fiverenana” tany Gaza.
Nahoana no miaro ny miaramila tsy ho atao fanadihadiana ampahibemaso?
Tamin'ny fanamarihany manazava  ny volavolan-dalàna, dia manondro ny “trangan-javatra mampiahiahy amin'ny fandraketan-tsary sy am-peo ny miaramila Isiraeliana” ataon'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana izay mandrakitra ireo fanitsakitsahana atao amin'ny Palestiniana.
Fikambanana iray tahaka izany ny Ivotoeran'ny Fampahalalam-baovao Isiraeliana ho an'ny Zon'Olombelona any amin'ny Faritra Bodoina, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe B'Tselem. Tamin'ny 4 Jolay, nosamborina  ny talen'ny mpikaroka eny an-kianja B'Tselem, Kareem Jubran raha naka sary ny fanomanana ny fanesorana an-terisetra ny vondrom-piarahamonina Khan al-Ahmar, talohan'ny namotsorana azy tamin'io andro io ihany.
“Amin'ny maha-fikambanana, voadaroka, niharan'ny fanorisorenana sy nosamborina ireo mpiasa ao aminay,” hoy i Amit Gilutz mpitondratenin'ny B'Tselem tamin'ny Global Voices. Mahita ny volavolan-dalàna ho toy ny ampahany amin'ny hetsika ataon'ny governemanta izay mampiseho ireo “mpiaro ny zon'olombelona rehetra monina ao anelanelan'ny Reniranon'i Jordana sy ny Ranomasina Mediteranea” ho toy ny ‘mpamadika’ i Giltuz
“Ny tena mazava dia hitohy foana, na izany aza, ny fandraketana ny zava-misy izay ezahin'i Isiraely afenina – fa tsy hisy fiovana,” hoy izy.
Na dia mety tsy hanakana ny mpikatroka sy ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona handrakitra ny fomba fanao sy ny politika Israeliana ao amin'ny sisintany atao fahirano aza ny fandaniana ny volavolan-dalàna, dia ho tsapa tokoa ny fiantraikan'izany eo amin'ireo vondrom-piarahamonina sy mpikatroka Palestiniana.
Nadim Nashif, tale mpanatanteraka ao amin'ny Foibe Arabo momba ny Fampivelarana ny Media sosialy, nilaza tamin'ny Global Voices hoe:
Ity volavolan-dalàna ity mikendry fotsiny ny sivana amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mahazatra ataon'ny tafika Israeliana eo ambanin'ny teny filamatra “raha tsy voarakitra izany, dia tsy nitranga.” Raha lany, dia mety atahorana hampitombo ny tsimatimanota eo amin'ireo miaramila Isiraeliana ary hampidi-doza kokoa ny Palestiniana izay efa saika nesorina tamin'izy ireo ny fomba hiarovan-tena sy hiarovana ny zo fototra maha-olombelona azy ireo.
Efa miatrika fandrahonana sy famerana marobe ireo Palestiniana manohitra ny fibodoana, anisan'izany ny herisetra, ny fihazonana, ny fanagadrana sy ny lalàna manafay. Miatrika fisamborana sy fanenjehana noho ny fitarihana herisetra  ireo izay mitodika amin'ny fampahalalam-baovao sosialy mba hanakiana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny politikan'ny fibodoana israeliana na mba hampiseho fotsiny ny zava-misy iainana andavanandron'ny fibodoana.
Ny volavolan-dalàna ‘fanesorana ny votoaty mitarika fampihorohoroana ao amin'ny media sosialy”
Ary misy ny volavolan-dalàna faharoa. Ny fanesorana ny votoaty mitarika fampihorohoroana avy amin'ny volavolan-dalàna momba ny haino aman-jery sosialy dia mety hanameloka izay votoaty heverin'ny governemanta israeliana fa “mety hampidi-doza ny fiarovana olon-tsotra, daholobe sy ny fanjakana”, na lahateny izay “mety hampidi-doza ny toekarena sy ny fotodrafitrasa Israeliana” hoy ny tatitry ny media ao an-toerana.
Hampiakatra avo roa heny ny fomba fanao efa misy amin'ny fanenjehana ny olona noho ny fanehoan-kevitra an-tserasera sy mangataka amin'ireo orinasan'ny haino aman-jery sosialy mba hanaisotra izay votoaty voalaza fa mitarika korontana izany. Efa tsy ara-dalàna  eo ambanin'ny fehezan-dalàna famaizana Israeliana tamin'ny taona 1977 sy eo ambanin'ny Fitsipika anaty tany misy hotakotaka 1945 ny fandrisihana herisetra.
In September 2016, Palestinian activists documented numerous suspensions  of personal Facebook accounts of Palestinian journalists and media pages. Four editors at the Palestinian Shehab News Agency and three journalists from Al Quds News Network, which both have millions of followers, had their personal accounts shut down . Supporters responded, protesting online under the hashtag #FBCensorsPalestine. Facebook later apologized  for the suspension and said that it was mistake.
[Manivana an'i Palestina ny FB]
Tamin'ny volana septambra 2016, nandrakitra fampiatoana kaonty manokana maromaro  an'ireo Palestiniana mpanao gazety sy pejim-baovao ireo mpikatroka Palestiniana. Tonian-dahatsoratra efatra ao amin'ny Sampam-pahalalaham-baovao Palestiniana Shehab sy mpanao gazety telo avy ao amin'ny Al Quds News Network, izay samy manana mpanjohy an-tapitrisany, no nakatona ny kaontin'izy ireo manokana . Namaly ireo mpanohana, nanao hetsi-panoherana antserasera tamin'ny alalan'ny tenirohy #FBCensorsPalestine. Niala tsiny avy eo ny Facebook noho ny fampiatoana ary nilaza fa fahadisoana no nahatonga izany.
Milaza ireo mpitsikera fa manohintohina ny fahalalaham-pitenenana ilay volavolan-dalàna. Tati-baovao  avy amin'ny Ivon-toerana Demokrasia Israely namintina fa mametraka “ohatra ara-pitsarana (dalàna) mampidi-doza” sy “manokatra ny varavarana ho an'ny loza ateraky ny sivana ataon'ny fanjakana” ny volavolan-dalàna.
Araka ny tatitra nataon'ny mpanoratra Tehilla Shwartz Altshuler sy Rachel Aridor-Hershkovitz:
Hetsika ara-pitsarana iraisam-pirenena mbola tsy nisy teo aloha ny fampiasana ny lalàna momba ny fitantanam-panjakana ex-parte, izay tsy misy porofo azo ekena mba hamantarana raha natao tokoa ny heloka bevava na tsia.
Efa miatrika fiampangana “firaisana tsikombakomba ” amin'ny fanivanana ny fanehoan-kevitra Palestiniana ireo orinasam-pampahalalam-baovao sosialy, indrindra indrindra fa ny Facebook. Iray amin'ireo niavian'ny volavolan-dalàna ny Minisitry ny Fitsarana, Ayelet Shaked, izay nanambara  fa mifanaraka amin'ny ‘ankamaroan'ny fangatahan'ny fanjakana hanaisotra votoaty mitarika korontana’ ny Facebook.
“Raha tokony hiaro ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera, saika manaraka an-jambany ny fangatahana ataon'ny governemanta Israeliana ho an'ny fanesorana votoaty ireo orinasan'ny media sosialy”, hoy i Nashif.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/24/123173/
 mihanika sy manakana : https://twitter.com/ajplus/status/1015450082726952960
 lahatsary iray : https://www.buzzfeed.com/rosebuchanan/people-by-a-video-purportedly-showing-israeli?utm_term=.dhpEKKnXd&bftwnews#.cvbQqq8jr
 mpanakiana ny politikany : https://www.ohchr.org/en/countries/menaregion/pages/psindex.aspx
 Palestiniana 700.000: http://www.middleeasteye.net/news/nakba-palestine-young-refugees-70-anniversary-gaza-west-bank-refugee-camp-440950682
 fahirano Gaza: https://www.theguardian.com/world/2018/may/20/gaza-blockade-remains-after-protests-crossings-closed
 mpanao fihetsiketsehana 138 farafahakeliny ary nandratra an'arivony: http://www.middleeasteye.net/news/israeli-forces-kill-palestinian-teenager-gaza-protest-great-march-return-100-days-971857939
 namoy ny ainy : https://cpj.org/2018/04/second-palestinian-journalist-dies-from-injuries-s.php
 fisamborana sy fanenjehana noho ny fitarihana herisetra: http://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/04/Palestine-2017-English-final.pdf
 hoy ny tatitry ny : https://www.jpost.com/Israel-News/Facebook-anti-incitement-bill-advanced-to-final-readings-562571
 numerous suspensions: http://www.aljazeera.com/news/2016/09/facebook-blocks-accounts-palestinian-journalists-160925095126952.html
 firaisana tsikombakomba: https://www.aljazeera.com/news/2018/01/palestinians-fight-facebook-youtube-censorship-180119095053943.html